के यो’नीको आकारले यौ’न सन्तुष्टिमा फरक पर्छ ? थाहा पाउनुहेास । – Jagaran Nepal
के यो’नीको आकारले यौ’न सन्तुष्टिमा फरक पर्छ ? थाहा पाउनुहेास ।
Jagaran Nepal सोमबार, भाद्र २१, २०७८
व्यक्तिपिच्छे मानिसको अनुहार आकारप्रकार फरक फरक हुने गर्छ । सबै मानिसहरुको आकारप्रकार र रुप एकै हुने गर्दैन । ठीक यही कुरा यो’नी अर्थात् महिलाका प्रजनन अंगको मुख्य भागको हकमा पनि लागू हुन्छ ।
महिलाको यो’नीको आकारले के फरक पर्छ ? यो युगौंदेखि उठ्दै आएको प्रश्न हो । यो प्रश्नबारे बढी चासो राख्नेहरुमा पुरुष रहने गर्छन् तर स्वयं महिलाको हकमा पनि यो कुरा कम चासोको विषय चाहिँ होइन ।
महिलाहरुले यो विषयमा खासै कुरा गर्न नचाहन पनि सक्छ, कतिपय महिलाहरुले तिनका यो’नीको आकारका बारेमा चिन्ता गर्न पनि सक्छ र त्यसले यौ’नान्दमा वा बच्चा जन्माउने सन्दर्भमा के कस्तो असर पार्न सक्छ भन्ने चासो र चिन्ता पनि तिनमा रहने गर्छ ।
तर यस क्षेत्रमा खासै अनुसन्धानहरु भएका छैनन् । किनभने, महिलाको यौ’न गतिविधिमा थुप्रै पक्षहरुले भूमिका खेल्ने गर्छन् । त्यसमाथि थप, यो’नीको आकार र यौ’नान्दका बीच के सम्बन्ध हुन्छ भन्नेबारेमा भन्नै कठिन पनि छ ।
‘‘यौ’नक्रियामा योनीको आकारको सम्बन्धका बारेमा बुझ्ने हाम्रो क्षमतालाई सही ढंगले बुझिएको छैन’’, क्रिस्टोफर टार्नेले वेवमेडसँगको कुराकानीमा यसो भन्छन् । उनी उक्ला मेडिकल सेन्टरका फिमेल मेडिसिन एण्ड रिकन्स्ट्रक्टिभ सर्जरी विभागका डाइरेक्टर हुन् । उनका अनुसार ‘‘बितेका १० देखि १५ वर्षमा यौ’न औषधी विज्ञानका क्षेत्रमा धेरै चासोहरु दिइएका छन् ।’’
यो’नी अत्यन्तै लचिलो, इलास्टिक जस्तो खुम्चने र तन्कने क्षमता भएको अंग हो’’, बाल्टिमोरस्थित मर्सी मेडिकल सेन्टरका एडोल्सेन्ट गाइनोकोलोजी एण्ड वेल वुमेन केयरका डाइरेक्टर क्रिश्टाइन ओ कोनोर भन्छन् । यो आफ्नो ठाउँमा टेम्पोन (महिनावारी भएको बेला रगत सोस्न यो’नीभित्र राखिने रुवा वा कपडाको सामान, जुन भिजेपछि फैलिने गर्छ र रगतलाई चुहिन दिँदैन) लाई अड्याएर राख्न सक्ने गरी सानो हुन सक्छ भने एउटा सिंगो बच्चालाई त्यसबाट पार गराउन सक्ने गरी फैलिन सक्ने पनि हुन्छ । यस्तो किन हुन्छ भने यो’नीका भित्री भित्ताहरु हाम्रा आमाशयसँग मिल्दोजुल्दो हुन्छ, त्यो प्रयोग नहुँदा एकअर्कामाथि खप्टिएर पत्रपत्र बनेर बसेको हुन्छ, जुन आवश्यक पर्दा फैलिन सक्छ ।
“त्यो एउटै निश्चित आकारमा रही रहँदैन”, ओ कोनोर भन्छन्, “यो तत्क्षण त्यसक्षेत्रबाट पार भइरहेको वस्तु वा चीजलाई ग्रहण गर्न सक्ने गरी परिवर्तित भइरहेको हुन्छ ।”
महिलाको यो’नीको आकारलाई नाप्ने काम सामान्यतः सबैभन्दा पहिले सन् १९६० को दशकमा मास्टर एण्ड जोनसनले गरेको कार्यबाट थालनी भएको पाइन्छ । उनीहरुले कहिल्यै गर्भवती नभएका १०० महिलाहरुमाथि परीक्षण गरेर हेर्दा सामान्य अवस्थामा महिलाहरुको योनी २.७५ इन्चदेखि ३.२ इन्चसम्म हुने गरेको पाएका थिए । तर तिनै महिलाहरु कामोत्तेजित हुँदा त्यो बढेर ४.२५ देखि ४.७५ इन्चसम्म भएको पाएका थिए । तर यो’नी कत्रो छ भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यौ’नक्रियामा योनीको बाहिरी एक तिहाई हिस्साले मात्रै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मानिएको छ ।
तर महिलाको यो’नीको लम्बाईले यौ’न सन्तुष्टिमा कसरी भूमिका खेल्छ भन्नेबारे कसैलाई पनि यकीन थाहा छैन ।
टार्नेका अनुसार, उनले महिलाहरुमा पाएको मुख्य समस्या भनेको यौ’नक्रियाका दौरानमा महसूस गर्ने असहजतापन नै हो । यो त्यस्तो बेलामा विशेष गरेर हुने गर्छ जब महिलाको यो’नी छोटो हुन्छ, कसिलो हुन्छ वा मुख्यतः बच्चा जन्माएपछि उनीहरुको अंग (पाठेघर, ब्लाडर वा अरु भित्री अंगहरु) खसेको हुन्छ । उनका अनुसार, “अंग खसेको अवस्थामा बाहेक, यो’नीको लम्बाईले यौ’न सन्तुष्टिमा कुनै असर पार्दैन ।”
टार्नेका अनुसार, “यो’नीको प्रवेशद्वारको आकारले चाहिँ फरक पार्न सक्छ ।” बच्चा जन्मेपछि उनीसमक्ष मानिसहरुले गर्ने सबैभन्दा बढी गुनासो यही विषयसँग सम्बन्धित हुने गर्छ ।
“महिलाहरु आफ्नो यौ’नक्रियामा परिवर्तन आएको जनाउँदै त्यसले आफ्ना यो’नी खुकुलो भएको र कम सन्तुष्टि प्राप्त भएको गुनासो गर्दै आउँछन्”, टार्ने भन्छन् । सन् १९९६ देखि चिकित्सकहरुले बच्चा जन्मेलगत्तै उनीहरुको यो’नीभित्रका भागहरु कसरी म’र्मत तथा पुनःनिर्माण भइरहेको हुन्छ भन्ने थाहा पाउन पेल्भिक अर्गान प्रोल्याप्स क्वान्टिफिकेसन सिस्टम भनिने विशेष खालको प्रणाली उपयोगमा ल्याउन थाले ।
टार्नेका अनुसार, यो नै महिलाको यो’नीको बच्चा जन्मनुअघि र जन्मेपछिको अवस्था सही ढंगले नाप्ने प्रणाली हो । डाक्टरहरुले थुप्रै महिलाहरुमाथि गरेको अनुसन्धानपछि सामान्य प्रसवको दौरान यो’नीमार्गबाट बच्चा जन्माउने महिलाहरुको यो’नीको प्रवेशद्वार केही बढेको पाएका थिए । त्यसो हुनुको कारण चाहिँ त्यस दौरानमा त्यस क्षेत्रका मांसपेशीहरुमा कमजोरी आउनु वा चोट पटक लाग्नु पनि हुन सक्छ”, टार्ने भन्छन् ।
“आफ्नो यौ’नाङ्ग क्षेत्रका मांसपेशीहरुलाई खुम्चाउन सक्ने महिलाले यो,नीको आकारलाई बढाउन वा घटाउन सक्छ, उनी भन्छन्, “त्यसो गर्न सक्नेले यो’नीको खुकुलोपनाको समस्यालाई कम गर्न सक्छ ।”
“केगल एक्सरसाइज भनेर चर्चित यौ’नाङ्ग क्षेत्रको मांसपेशीलाई फैलाउने तथा खुम्चाउने अभ्यासले यो क्षेत्रको मांसपेशीलाई कसिलो बनाउन मद्दत गर्छ” भन्दै टार्ने अगाडि भन्छन्, “यसो गरिए सामान्यतः यौ’नान्दमा पनि बृद्धि हुन सक्छ ।”
“केगल एक्सरसाइज भनेर चर्चित यौ’नाङ्ग क्षेत्रको मांसपेशीलाई फैलाउने तथा खुम्चाउने अभ्यासले यो क्षेत्रको मांसपेशीलाई कसिलो बनाउन मद्दत गर्छ” भन्दै टार्ने अगाडि भन्छन्, “यसो गरिए सामान्यतः यौ’नान्दमा पनि बृद्धि हुन सक्छ ।” सन् २००८ मा अस्ट्रेलिन एण्ड न्यूजिल्याण्ड जर्नल अफ अब्सटेट्रिक एण्ड गाइनोकोलोजीमा प्रकाशित एक अध्ययन रिपोर्टमा नियमित रुपमा केगल एक्सरसाइज गर्ने महिलाहरुले उक्त एक्सरसाइज नगर्ने महिलाहरुले भन्दा बढी मात्रामा यौ;नआनन्द महसूस गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
तर मुख्य समस्या के हो भने बहुसंख्यक महिलाहरुलाई त्यो केगल एक्सरसाइज भनेको के हो र त्यो सही ढंगले कसरी गर्ने भन्नेबारे थाहा नै हुँदैन ।
विज्ञहरुका अनुसार, यो एक्सरसाइज गर्न सजिलो छ । विशेष गरेर मु’त्रत्याग गर्दा सकेसम्म च्याप्ने वा रोक्ने, अलिकति मु,त्र त्याग गर्ने फेरि च्याप्ने– यो प्रक्रिया केहीबेर दोहोर्याउने । अर्को तरिका भनेका यो’नीभित्र औंला छिराउने र त्यसलाई यो’नीको मांशपेशी खुम्चाएर चेप्ने । करिब १० सेकेन्डसम्म च्यापिराख्ने र छाड्ने । यो प्रक्रिया एक पटकमा १० देखि २० चोटी गर्ने र दिनमा ३ पटकसम्म गर्ने । यो व्यायाम गर्दा सकेसम्म श्वास सामान्य तरिकाले छाड्ने र खुट्टा पेटका मांसपेशीहरु सकेसम्म नखुम्च्याउने । यसो गरेमा योनी क्षेत्रका मांसपेशीहरु कसिलो बन्न मद्दत पुग्छ ।
केही महिलाहरुमा चाहिँ बच्चा जन्माउने क्रममा त्यस क्षेत्रका स्नायुहरुमा क्षति पुगेका हुन्छन् र त्यो केगल एक्सरसाइज गर्ने मांसपेशी महसूस नगर्न पनि सक्छ । टार्ने भन्छन्, त्यस्तो अवस्थामा केगल एक्सरसाइज सही ढंगले सिक्नको लागि विशेषज्ञहरुको मद्दत लिनुपर्ने पनि हुन सक्छ ।
ह’स्त’मै’थु’न गर्नुका सात फाइदाहरु के के हुन् ? जान्नै पर्ने कुरा। पुरा पड्नुहोस
युवतीहरु विवाहपछि मोटाउनुको खास कारण यस्तो रहेछ !
रसिलो याै’न जीवन कसिलो सम्वन्धः हरेकले जान्नैपर्ने १० टिप्स !
महिलाले जवानीमा कहिल्यै भुल्न हुदैन यी कुराहरु
महिनाबारी पछि कुन दिनको से; क्स’ सबैभन्दा सुरक्षित ?